Namoaka ny mpiofana 90 mianadahy andiany faharoa ny Amis de Lakroa
Estelle ADL il y a 4 mois
Sarotra ny fiainana ankehitriny. Maro ny kivy sy miraviravy tanana. Tsy vitsy ny miandry fanampiana sy tolo-tanana avy etsy sy ireo izay mitondra mankany amin’ny fiankinan-doha. Hevitra tsara sady loharanom-pandrosoana kosa ny asa fitiava-namana ifampizarana talenta mampivoatra sy mitsinjo lavitra.
La Fondation Axian a construit des classes de préscolaires
L’inauguration combinée des 5 établissements préscolaires construits dans le cadre du programme Sekoly Telma de la Fondation Axian est réalisé le mercredi 16 juin à Antanimena II.
Mijery lavitra sy fampianarana toa ampitain-davitra
Ny Volana il y a 6 mois
Noho ny hamehana ara-pahasalamana, mbola mikatona ny sekoly sy ny fiangonana ao amin’ny Faritra Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony ary Anosy. Ao anatin’izay, tavela ny famahanana ny saina sy ny fanahy, fa mifantoka loatra amin’ny famahanana ny vatana ilay Malagasy.